October 2020 - Page3of 18 - Amawpyay
ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော်ကြီး ဟောကြားတဲ့ “စိတ်ဆိုးရင် စကား မပြောနဲ့”
ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော်ကြီး ဟောကြားတဲ့ “စိတ်ဆိုးရင် စကား မပြောနဲ့” ဘာဖြစ်လို့လဲ? စကားကောင်း မထွက် ဘူး ဒါဆို ဘယ်လိုပြော ရမလဲ? စကား အပြော အဆိုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဘုရားက ဟောကြားပေး ထားတာ ရှိတယ် စကားပြောတဲ့ အခါမှာ ၁။ ပြောသင့်တဲ့ အချိန်မှာ ပြောမယ် မပြောသင့်တဲ့ အချိန်မှာ မပြောဘူး.. ၂။ မှန်တာကိုပဲ ပြောမယ်.. မမှန်တာ ကို မပြောဘူး ၃။ ပြောမယ် ဆိုရင် လည်း ကြင်ကြင်နာနာ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ ပြောမယ် ၄။ ပြောတဲ့အခါမှာ အကျိုး ရှိတဲ့ စကားကို …
ကိုမင်းဦးနဲ့ တုန်းက အရမ်းချစ်ခဲ့တာ၊နောက်ဆုံးတော့လည်းအနားမှာရှိတဲ့သူက အချစ်ဆုံးသူပဲဖြစ်သွားတာပဲ .ထက်ထက်မိုးဦး
ကိုမင်းဦးနဲ့ တုန်းက အရမ်းချစ်ခဲ့တာ၊နောက်ဆုံးတော့လည်းအနားမှာရှိတဲ့သူက အချစ်ဆုံးသူပဲဖြစ်သွားတာပဲ .ထက်ထက်မိုးဦး ထက်ထက်မိုးဦး ဟာ ရွှေစင် ရတနာရွှေဆိုင် ကြော်ငြာ ကနေ တဆင့် ကလေးရော၊ လူကြီးပါ မကျန် တခဲနက် အားပေး ခဲ့ကြတဲ့ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်ပါ။ တစ်ခေတ်တခါ က ကြော်ငြာဘုရင်မလေး လို့တောင် တင်စားခေါ်ဝေါ်ခဲ့ ကြတာဖြစ် ပါတယ်။ ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမူအရာလေးတွေက ပရိသတ်ကို အချစ်မလျှော့အောင် အမြဲဆွဲဆောင် နိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ ဒီနောက် ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား ပေါင်းများစွာ၊ တီဗီကြော်ငြာပေါင်း များစွာ တို့ကိုလည်း ရိုက်ကူးခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်ဒမီများစွာ ဆွတ်ခူးနိုင် ခဲ့တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးဟာ အိမ်ထောင်ရေးမှာ ကံမကောင်းခဲ့ပဲ …
သိန်းပေါင်းများစွာတန်တဲ့ ဘရန်းဒက်ပစ္စည်းတွေကို အမည်မဖော်လိုသူတဦးဆီက လက်ဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်း ပြောပြခဲ့တဲ့ ဇေရဲထက်
သိန်းပေါင်းများစွာတန်တဲ့ ဘရန်းဒက်ပစ္စည်းတွေကို အမည်မဖော်လိုသူတဦးဆီက လက်ဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်း ပြောပြခဲ့တဲ့ ဇေရဲထက် မင်းသားချောလေး ဇေရဲထက်ဟာ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားပေါင်း များစွာကို ကျရာနေရာကနေ သရုပ်ဆောင်ရင်း ပရိသတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲနက် အားပေးမှုတွေကို ရရှိ ထားသူ တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်ပါ တယ်။ ဇေရဲထက်ဟာ လူငယ်ဆန်ဆန် ဖက်ရှင်လေးတွေကို လိုက်ဖက် ညီအောင် ဝတ်ဆင်တတ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါ တယ်။ သူဟာ လတ်တလော မှာတော့ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုတွေ မရှိတာကြောင့် အိမ်မှာနေရင်း အပန်းဖြေ အနားယူ လျက် ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ မိသားစု ကျန်းမာရေး အတွက်လည်း အရသာရှိတဲ့ …
ရွှေတိဂုံ စေတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ စိန်ဖူးတော်ပါ မြင်တာနဲ့ ချက်ချင်း ရှဲလိုက်ပါ သင်ကံကောင်းလာလိမ့်မယ်
ရွှေတိဂုံ စေတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ စိန်ဖူးတော်ပါ မြင်တာနဲ့ ချက်ချင်း ရှဲလိုက်ပါ သင်ကံကောင်းလာလိမ့်မယ် သင်ကံကောင်း လာလိမ့်မယ် ကပ်ရောဂါ ကြီးဘေး မှလည်း ကင်းဝေးကြပါစေ..။(၇)ရက်သားသမီးများ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ဘေးရန် ကင်းကွာ ချမ်းသာ ကြပါစေ..။ မင်္ဂလသုတ်တော်..၊ ၁။ ယံ မင်ျဂလံ ဒှါဒသဟိ၊ စိန်တယိံသု သဒဝေကာ၊ သောတ်ထာနံ နာဓိဂစ်ဆန်တိ၊ အဋ်ဌတ်တိံ သဉ်စ မင်ျဂလံ ။ ၂။ ဒသေိတံ ဒဝေဒဝေနေ၊ သဗ်ဗပါ ပဝိနာသနံ ။ သဗ်ဗလောက ဟိတတ်ထာယ၊ မင်ျဂလံ တံ ပဏာမ ဟေ ။ ၃။ ဧဝံ မေ သုတံ၊ ဧကံ သမယံ …
ဒီနေရာလေးတွေကိုဖိနှိပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ကနာကျင်ကိုက်ခဲမှုတွေကိုသက်သာစေတယ်ဆိုပဲ လူတိုင်းလိုလို ညောင်းညာ နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်းတွေကို အနည်းဆုံး တစ်ခါမဟုတ် တစ်ခါတော့ ခံစားဖူးကြ မှာပါ။ ဒီလို ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်နေရာ မဆိုညောင်းညာ ကိုက်ခဲခြင်းကို ခံစားနေရပြီ ဆိုရင်တော့ ဘယ်လို နေရာလေးတွေကို နှိပ်နယ်ပေး လိုက်တာနဲ့ သက်သာသွားစေနိုင် သလဲဆိုတာ 1. မျက်ခုံးနစ်ခုကြားနေရာ မျက်ခုံးနှစ်ခုကြား မျက်ကြောဟာ နေရာကို လက်မလေး နဲ့ဖိဖိပြီးနှိပ်နယ်ပေးခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်က နာကျင်ကိုက်ခဲ မှုတွေ ကိုပြေလျော့စေ ပါတယ်။ 2. လက်ကောက်ဝတ် လက်ကောက် ဝတ်နားကို လက်ချောင်းလေးနဲ့ အသာလေး ဖိပေးပြီး နှိပ်နယ်ပေးခြင်းဟာလည်း ညောင်းညာ ကိုက်ခဲခြင်း သက်သာစေ တာပါပဲ။ 3. နားထင် …
လွယ်အိတ်လေးတစ်လုံးနဲ့ ပိုက်ဆံတွေထုတ်ခါ ပကာသနမပါတဲ့ ဖြူဖြူထွေးရဲ့မြတ်သောအလှူ (ရုပ်သံ) လွယ်အိတ်လေးတစ်လုံးနဲ့ ပိုက်ဆံတွေထုတ်ခါ ပကာသနမပါတဲ့ ဖြူဖြူထွေးရဲ့မြတ်သောအလှူ မင်းသမီးလေး ဖြူဖြူထွေး ကတော့ ရိုးသားပွင့်လင်းပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမူအရာလေးတွေနဲ့ ပျော်ပျော်နေတတ်သူ တစ်ယောက်ဖြစ် တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တွေကို အပြည့်အဝ ရရှိထားတဲ့ သူလေးဖြစ် ပါတယ်နော်။ သူမဟာ ဟန်ဆောင်မှု ကင်းပြီး ရိုးရိုးသားသားနဲ့ နေတတ်တဲ့ သူလေးလည်း ဖြစ်တဲ့ အပြင် အလှူအတန်း ဆိုလည်း လက်မနှေးပဲ ရက်ရက်ရောရော လှူတတ်တဲ့ သူလေး ဆိုလည်း မမှားပါ ဘူးနော်။ ဖြူဖြူထွေ ကတော့ ယခုလို ကိုဗစ် အကြပ်တည်း ကာလ မှာတောင် ကြော်ငြာတွေမနားမနေ ဆက်တိုက် ဆိုသလို …
ကိုဗစ်ကာလ ပြည်သူတွေကို နေ့စဉ်နားဒုက္ခပေးနေတဲ့ ဘနားနားကို မေတ္တာရပ်ခံလိုက်တဲ့ ဒိန်းဒေါင်
ကိုဗစ်ကာလ ပြည်သူတွေကို နေ့စဉ်နားဒုက္ခပေးနေတဲ့ ဘနားနားကို မေတ္တာရပ်ခံလိုက်တဲ့ ဒိန်းဒေါင် ပရိသတ်ကြီးရေ ဒိန်းဒေါင် ကတော့ ပရိသတ်အားပေးချစ်ခင်ရတဲ့ ဟာသလူရွှင်တော် သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေ ပျော်ရွှင်အောင် ဖန်တီးပေး သလ်ို ပရိသတ်တွေ ဒုက္ခရောက် ချိန်မှာလဲ ကူညီးပေးနေ သူပဲဖြစ် ပါတယ်။ ယခုလို ကိုဗစ်ကာလမှာ ဒုက္ခရောက်နေ သူတွေကို နေ့စဉ်နှင့် အမျှ ကူညီပေးနေပြီး ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်နေ တာပဲဖြစ် ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ဒိန်းဒေါင်က ပရိသတ် အချစ်တော် ခြိမ်ကေကို ကိ မေတ္တာရပ်ခံမှု တစ်ခုပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်။ ဒိန်းဒေါင်က “ဘနားနား(ခ)ခြိမ့်ကေကို သိစေရန် ကိုဗစ်ကာလ တွင်ပြည်သူများအားနေ့စဉ် …
ဝမ်းနည်းစရာ ကိစ္စတစ်ခုကြောင့် ကျလုနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ မျက်ရည်တွေကို ချုပ်ထိန်းပြီး ဟန်မပျက် ဈေးရောင်းပေးနေခဲ့တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး တစ်နိုင်ငံလုံးက လူကြီး၊ လူငယ် ပရိသတ်မရွေး ချစ်ခင်ကြ တဲ့ မင်းသမီးချော ထက်ထက်မိုးဦးကတော့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကြောင့် ပရိသတ်နဲ့ ခဏတာ အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက် သွားခဲ့ပြီးနော် လက်ရှိ မှာတော့ သူမရဲ့ ဘုရင်မ သရဖူကို ပြန်လည်ဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ အွန်လိုင်းမှာ Live လွှင့်ဈေးရောင်းပေးရင်း ထက်ထက်မှ ထက်ထက် ရယ်လို့ ဖြစ်နေတဲ့ ပရိသတ်တွေ အတွက် ထက်ထက်မိုးဦး ကတော့ ချိုသာ တဲ့အပြုံး၊ ချစ်စဖွယ် အမူအယာလေးတွေနဲ့ ဖမ်းစားနိုင်နေ ဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးက ပရိသတ်တွေရဲ့ …
ကြွေးဟောင်းကိုလဲ ဆပ်ပါ ၊ကြွေးသစ်ကိုိလဲချပါ ၊ရွှေအိုးလဲ မြုပ်ပါ
ကြွေးဟောင်းကိုလဲ ဆပ်ပါ ၊ကြွေးသစ်ကိုိလဲချပါ ၊ရွှေအိုးလဲ မြုပ်ပါ မိဘတွေဆိုတာ သားသမီး တွေရဲ့အပေါ်မှာ အင်မတန် ချစ်ကြတယ်,မြတ်နိုးကြတယ်, လုပ်ပေးနိုင်သလောက် အကောင်းဆုံး လုပ်ပေးချင် ကြတယ်။ဒါ ကြောင့် ကိုယ့်အပေါ်မှာ ကျေးဇူးတရားတွေ အများကြီး ရှိတယ်။ ဆက်ပြီးတော့ ပြောချင်တာက ကျေးဇူးတရား သဘောတင် မကဘူး ကြွေးသဘော မျိုးပါ တင်နေတယ်ဆိုိတာကို နားလည်စေ ချင်တယ်။ ကြွေးဆိုိ နည်းနည်းတော့ ရင့်သီး သွားတာပေါ့။ ကျေးဇူးဆို တော့ နည်းနည်းနူးညံ့တဲ့သဘော ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြွေးဆိုတဲ့ အသုံးအ နှုန်း မြတ်စွာဘုရား ကိုယ်တော် တိုင် သုံးခဲ့တာ။ သူတော်ကောင်းတိုိ့ ကြားဘူးပါတယ်၊သာလိကေဒါရဇာတ် ဆိုတာ။ ကေဒါရကျေးမင်းဇာတ်မှာ ဘုရားလောင်းက …